6 si ay u tixgeliyaan Diiwaangelinta Is-dhexgelinta - Cadastre - Geofumadas
dhinacyo 6 si ay u eegaan in Registry qalabixinta - Cadastre
Ogast, 2015 cadastre, egeomates My, Leisure / waxyi
Samaynta Nidaamka Diiwaan-gelinta iyo Diiwaan-gelinta Dakhliga Guriyeynta ayaa hadda ah mid ka mid ah caqabadaha ugu xiisaha badan habka casriyeynta hababka xuquuqda hantida.
Dhibaatadu inta badan waa isku mid, xiitaa ka baxsan xayiraadda Hispanic. On Niyadda hal gacan si aad u rumaysan yahay si fudud, ka dibna sawir isagoo ka mid ah dhismayaashii hay'adaha Quaternary. Dhamaadka, qofka lumiya waa muwaadin kasta oo uu rabo waa inuu si dhaqso ah iyo amaan ah loo fuliyo. Runta waxa ay tahay in la joogo ma jiraan recipe sixir, maxaa yeelay, inkastoo ay tahay arrin dareen caadi ah, dhaqanka noo muujinaysaa in tani ay tahay dareenka yaraan caadiga ah ka mid ah kuwa ku lugta leh silsilad nidaamka xawilaadda ah.
Aadanuhu waa gaaban ee xasuusta ka dib markii button la guuldareysteen, waana ceeb ammaanta guul mashquulin gabayaaga hor systematizers loo tiriyo iminka aan faan laakiin sida dhaqanka fudud ee dimuqraadiyadda aqoonta. dadka kale Sure ka dhigay qalad yar, laakiin halkan waa aasaaska qaar ka mid ah portraiture sidii aynu dal ee Central America, iyadoo statements qaar ka mid ah oo ku saabsan Cadastral 2014, 19152 heerka ISO ka soo baxay.
1. Qeexidda iyo dhismaha Nidaamka waa vertebral.
Nidaamka nidaamku mar dambe maahan mid la yaab leh, maadaama aan ku noolnahay wakhti horumarin farsamo ah oo dib u habeyn lagu sameeyo. Dabcan inaan laga hadlin oo kaliya oo ku saabsan qalabka, laakiin deegaanka oo dhan oo ay ku jiraan qeexidda ganacsiga, ciyaartoyda ku lug, taageero sharci, Tusaale fiican ee hababka farsamo, kor u geedi socodka, fududaynta kuwa la xiriira maamulka dhulka iyo wareegga nolosha ee qalabka farsamada.
Iyadoo aan lagu qeexin qeexida saxda ah ee ganacsiga, nidaamkani wuxuu ku guuldaraystaa badiyaa. Sababta oo ah qalabka kaliya waa dhexdhexaad.
Daraasad noocee ah, socodka ayaa lagu sameeyay qaabka soo socda, isagoo caddaynaya in aysan ahayn talaabooyin xiga laakiin ku dhowaadba barbar socda, kuwaas oo intooda badan lagu sameeyey muddo laba sano ah:
Mashruuc loo sameeyey oo diyaar u ah Diiwaan gelinta, hantida maguurtada ah iyo Cadastre, oo loo arko diiwaangelin kale. Tani waa Nidaamka Mideysan ee Diiwaanada (SURE), kaas oo ka dib sanadaha 11, sii wadaan inuu shaqeeyo, ka dib afar wareeg oo dawladda ah -oo ay ka mid yihiin af-duub- Dib u noqoshada khayraadka aadanaha oo tayo leh, go'aamo aan kala go 'lahayn iyo waxkasta oo aanu ku caan qaadanno dalalka soo koraya. Waxa uu ka eryay Degmada Registral la meel ka mid ah sirqoollada 160,000 hadda ka hawlgasha 16 degmooyinka 24 iyo sababta ugu weyn waxa aan la saaro sababta on jajuubi siyaasadeed waxa ay aheyd sababta oo ah waxa uu ahaa qalab la shaqeeya ee dadka isticmaala ee Diiwaangelinta iyo Cadastre -tan iyo markii la abuuray-.
Naqshadda Nidaamka Nidaamka, Nidaamka Diiwaangelinta iyo Cadawga waxaa la soo saaray kowaad, iyo si aan habooneyn, kuwa laga yaabo inay ku yimaadaan sharciga cusub.
Tusaalaha domain ee Cadastre wuxuu ahaa Diiwangalinta Diiwaangalinta Dakhliga Dakhliga ee CCDM, in 2003 uu ahaa mid aan la taaban karin ka dib markii 2014 Cadastre uu ahaa masal ahaan. Waxaa laga yaabaa in tani ay ahayd mid ka mid ah sababaha keenay nidaamka abaalmarinta iyo ra'yi aad u fiican oo ku saabsan qabashada FIGI ee Czechoslovakia.
Jaantuska kor ku qoran wuxuu muujinayaa isku xirka Folio Real ee Nidaamka Mideysan ee Diiwaangelinta, iyada oo lagu darayo Wareejinta taas oo ah daciifnimo aan lagu qaabeynin ISO 19152. waqtigeeda ma aysan haysan magacyadan, sababtoo ah CCDM waxay ahayd mid aad u soo jeedisay; laakiin laftigeedu waa laftiisa. CCDM maanta waa ISO 19152, loo yaqaan sida LADM.
Inkasta oo qalabka farsamada uu yahay midka ugu muuqda marka la eegayo xilliga natiijada muujinta natiijada, tani waxay galineysaa falanqayn iyo nidaamisyo hababka jira oo leh taariikhda u gaarka ah. Dhab ahaan, sababtoo ah codsiyada hababka kala duwanaanshaha u dhaxeeya diiwaan-hayaha iyo mid kale; sidoo kale sababtoo ah marka la samaynayo otomaatig, ma shaqeynayo waraaqda ma shaqeynayso nidaamka makaanikada. Hase yeeshee aan laheyn, in qaar ka mid ah xaaladaha, waxaa la doorbidi karaa in uu noqdo kaligii taliye halkii uu ka noqon lahaa mid la mid ah; qaar ka mid ah kuwii sida loola qasbay in ay isbedel ku sameeyaan bateriga isbeddelka ma fududa in la isku dhejiyo.
Waxa kale oo lagama maarmaan ahayd in la sameeyo shaqo-dejin weyn oo sharci-dejin ah oo ay fududayd in la abuuro sharci cusub marka loo eego dib-u-habeeynta mid ka mid ah. Diiwaangelintu waxay ku tiirsanayd Maxkamadda Sare ee Cadaaladda, Cadastarka Xoghaynta Madaxtooyada iyo Machadka National Geographic ee Wasaaradda Hawlaha Guud. Waxay ahayd lagama maarmaan in la abuuro farsamooyin cusub oo loo maro habaynta, si loo tuso tusaale fudud, in la wareegidda magaalooyinka halkaas oo ay jiraan isku dhac munaasabado iyo dadka ay bixiyaan milkiilayaal kala duwan. Sharcigu wuxuu u oggol yahay in la wareegto isaga oo ka wakiil ah dawladda, si loo abuuro kalsooni halkaasoo dadku ay sii wateen, ay heleen shaqadooda, mulkiilayaashii hore waxay u baxsadeen maxkamad si ay ula dagaallamaan kiiskooda. Marka la xalliyo, lacagta kalsoonida waxay noqon doontaa mid ka mid ah kii ku guuleystay tijaabada.
Inkastoo laba sano aysan wax isku qabsanayn wax walba, markii ay dawlada cusub soo gasho suurtagal maaha in dib loo celiyo. Qalabka waxaa loo shaqeeyay si ay u noqoto mid aan suurtagal ahayn in la qabto shaqada iyada oo aan la isticmaalin nidaamka.
2. Isbedelka diiwaangelinta farsamada Folio Personal to Folio Real
Taasna waxaa jira buugaag oo dhan, isku kalsooni iyo khaladaad ku xiran qofka wuxuu difaacayaa xaaladiisa. Xaaladda daraasaddan, farsamada dhabta ah ee farsamada dhabta ah ayaa horey u jirey sharciga, laakiin aan loo isticmaalin sidaasi, sidaas darteed go'aanka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in la joojiyo isticmaalka Folio-ka.
Dhaqanka guud ahaan, farqiga u dhexeeya labada farsamo ayaa ku jira habka loo xareynayo dukumeentiyada taageeraya xuquuqda hantida.
Farsamada Falsafada Shakhsi ahaaneed, waxay ku hayaan taxanaha kuwa heysta, ma ahan shay, sidaas darteed aqoonsiga kursiga wuxuu raacayaa macaamil ganacsi. Inkasta oo heer sare ah waxaa isku haysto, oo dhaxalkaygiina awowayaashayo waxba ma dhaxlin ka ayeeyooyinka our leeyahay farsamo this dammaanadda sharciyeed, sababtoo ah waxa uu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican, laakiin sababtoo ah si fiican u codsatay dadka caadaysteen in ay wax u sameeyaan si, shaqeeyay si aad u wanaagsan soo socda tallaabooyinka macquul ah soojeedinta, wax ka dhignaanta mugga maalinlaha, marginalization, xakamaynta qaybinta, isku dhacyada iyo u qalmidda. Dhibaatooyin kacay in xaqiiqda ah in ay ka shaqeeyaan soojeedin ahayd lagama maarmaan in la tasho oo laysku raacsan in muda oo kale, sidaa darteed mugga sare ee macaamil ganacsi maalin walba soo noqonayay markii jawaab aad u gaabis ah, aan halmaamay in diiwaangelinta ahayd wax aan macquul aheyn in la xakameeyo dheelitirka xaaladaha aan ku lug individualization buuxa, control of homonyms ahaa waalan oo aan xaaladaha shakhsiyeed horumar, proindivisos iyo bulshada sida hantida yar oo dheeraad ah degan ka badan Fe. Waa in sidoo kale la caddeeyo, in Folio xaqiiqda aan adeecin hababka casriga ah; Farsamooyinka liidata ee liidata waxay u horseedi karaan khaladaadka siman. Mar labaad: Haddii aysan ka shaqeynin waraaqda, ma shaqeynayso nidaamka wax lagu shaqeeyo, haddii aysan ka shaqeynin nidaamka hore, waxa hubaal ah inaysan ka shaqeyn doonin mid cusub.
Farsamada 'Folio' dhab ah, waxay ka duwan tahay, waxay muujinaysaa sifooyinka ay ku qoran taarikada liisan ee aqoonsiga gaarka ah, oo ay ku jiraan canshuuraha, milkiilayaasha, hagaajinta, isku xirka, iyo sifooyinka kale ee hantida loo gudbiyo. Tani waxaa loo sameeyaa qaab la soo saaro, iyadoo la tixraacayo fooros, oo ka soo horjeeda Folio Personal halkaas oo lagu qeexay dukumeentiga ahaa iyo miisaankuna wuxuu ku jiraa marginalization. Marka la eego heerka ISO 19152, hantida waa Cutubka Maamulka (BA_unit), kaas oo lagu shaqeyn karo Folio-yada Shakhsiga ama Folio Reality. Dabcan, hantida Folio Real waxay ku dhowdahay ujeedka dhismaha cadawga iyo habka isku xirka ayaa fududeyn doona.
3. Jaangooynta nidaamka cadawga.
stage Cadastral ee casriyeynta ma ahaa daruuri u wacan, maxaa yeelay, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya farsamo oo ahaa madaxa waardiyayaasha jir ah oo lahaa aqoon ku filan oo la lugeeyaa la technology cusub waxay garanayeen balse ma aan ogayn saldhigyo badan oo sharci ah cadastre la ahbaa. Wanaagsan ama xun, waxaan ku takhasusnay khaladaadka, faa'iidaduna way ka weyntahay.
Dhibaato ka jirta Cadastre waa in ay rajeyneyso in ay isdifaacdo sida jasiirad gaar ah oo aad u kacsan, sababtoo ah kuma koobna geedi socodka macaamilka. Yaa dooneynin in qashin-qubka loo yaqaan "cadastre" la ixtiraamo dhammaan hawlaha iibka, beddelaadda, qiimeynta, qorsheynta isticmaalka iyo hababka qaab-dhismeedka cusub.
Waxay ahayd lagama maarmaan in la sameeyo isbaddal iyo dukumiinti, sababtoo ah si daacadnimo badan ayaa loo sheegay shisheeye shisheeye ah laakiin lama diiwaangelin. Run ahaantii kuwani waa dhinacyo badan oo ka soo jeeda wadamo badan, laakiin waxaan kaliya u sheegaa inay daacad u tahay kiiskeena daraasaddeena, halkaasoo Cadastre uu yahay tartan adag. Waxyaabaha ugu muhimsan ayaan ku xasuustaa:
Kor u qaadista topolojigu waa socotaa; oo ka mid ah bakhaarada iyo alaabooyinka isticmaalka dadweynaha sida jidadka, webiyada, mulkiilada, iwm. Kuwii hore ayaa loo xilsaaray furaha cadcad iyada oo ay ku jiraan rikoodhka cadastiga ah, hantida adeegsiga dadweynaha ayaa sidoo kale muhiim u ah caddaynta caddaynta ah ee ay la socoto maamulkeeda. Tani waa lagama maarmaan, tan iyo kuraasta hantida, marka ay ka tagayaan demembrando waxay u baahan yihiin jiritaanka dhammaan meelaha laga soo galo iyo meelaha laga baxo; iyo sidoo kale in la xakameeyo khayaanada mustaqbalka ee hantida dadweynaha ee diiwaangashan.
Cadastre 2014: Cadastre 2014 wuxuu tilmaamayaa xaalada sharci ee buuxda ee dhulka, oo ay ku jiraan sharciga dadweynaha iyo xayiraadaha.
Kala soocista xogta ayadoo la adeegsanayo takhasuska sharci-dejinta. Khariidadaha ka hor casriyeynta casriga ah waxay ahaayeen shaqooyinka runta ah ee farshaxanka, marka lagu daro santuuqyada waxay ahaayeen goobaha dabiiciga ah, aagagga la ilaaliyo, meelaha juqraafi ah, meelaha khatarta ah, iwm. Kuwani waxay u kala baxsadeen khariidado madaxbannaan, taasoo ka dhigaysa in khariidadaha qulqulka ay u muuqdaan kuwo fudud, laakiin si ay u fududeeyaan digitization iyo automation ee hababka saqafka.
Tani waxay sidoo kale abuurtay xoogaa isku dhacyo ah, maadaama Cadastre uu u ekaa sameeye wax walba. In kasta oo uu gabi ahaanba awoodi kari waayey in uu sharciyeeyo kaalintiisii, taas oo ay hore uga jireen hay'ado mas'uul ka ah laamihiisa. Ku mideynta Machadka Qaranka ee Joqoraafiga Qaranka iyo National Cadastre sidoo kale ma aheyn talaabo caqli gal ah, maahan maxaa yeelay lama qaban karo, laakiin maxaa yeelay bey'adda aan qaan gaarin ayaa u horseeday IGN doorka guddiga sharciyeynta sawir qaadeynta; wakhtigaas fikradda IDE waxay ahayd mid aan macquul ahayn oo u muuqatay inay awooda ka qaadayso «sawir muujiye weyn«.
Cadastre 2014: Cadasti-gacmeedku wuxuu noqon doonaa wax la soo dhaafay.
Kala soocida jadwalka cusbooneysiinta ee cusboonaysiinta. By nadiifinta sirqoollada iyo chips ay u kacay inuu la dalbadaa map mar digital ah matoorada record-xirid iyo markaas la abuuro Geoparcela (Spatial_unit) + codsiga kaga masuugin sharci iyo maamul (Restrictios + Responsabilities + Rights).
Jaantusku waa mid gaar u ah geeddi-socodka ballaaran. Ma aha mid ka mid ah dhammaadka kale ee qaliinka, hase yeeshee wax badan ama yar ayaa soo koobaya macquulnimada is-waafajinta Folio Real iyada oo lala xiriirinayo gawaarida Cadastre.
Marka abuuray xiriirinaya sheet-Map, la filayaa dhegeysiga dadweynaha, ka dib markii taas oo beerta tab u guuray cadastral rikoor ah wax isbedel ah lagu sameyn doonaa via dayactirka codsi cadastral. Tani waxaa hadhay in xaaladda in la sameeyo codsi uu u xiiseynaya, ex officio ama codsiga ee ka diiwaan gashan (kormeerayaal xagga ama degmada farsamo) isticmaala. Hadda geedi socodka hore trust a sameeyay liiska eed wafdiga in shaqaale gaar ah oo aan kaliya ku shaqeeyaan, laakiin sidoo kale Cadastre iyo System Diiwaanka Update.
Cadadka 2014 wuxuu noqon doonaa mid aad u sarreeya. Qaybta dadweynaha iyo qaybaha gaarka loo leeyahay ayaa wada shaqayn doona.
Qariiradda forensic, oo hadda ku habboon LADM gedisyo, ayaa muujinaya sida geedi socodka loo sameeyay qaab nidaamsan, sidaas darteed tallaabooyinka hore moodaynta kaliya, laakiin waxay noqon kartaa mid si otomaatig ah u shaqeynaya iyada oo loo marayo qaab hawleed oo joogto ah
Cadastre 2014: Gaadiidka cadawga wuxuu noqon doonaa qayb ka mid ah wakhtiyadii hore. Qaab nololeed dheer
Sida aad hore u ogeyd, waxaan ahay mid fudud oo kooban oo kooban sababtoo ah xanibaadaha sabirka ee akhristayaasha internetka. Laakiin qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha aan qabannay waa khalad. Ironic, laakiin mid ka mid ah dhinacyada ka baxsan waxay ahayd arrin maaliyadeed, oo ka fakaraysa kala qaybsanaanta sharci-dejinta, oo siinta mudnaanta aad u leedahay kan sharciga ah. Inkasta oo awoodda sharciyadeed ee xisaabtu ay tahay mid aan gacanta ku hayn, haddana waxaan ka sii wadi doonaa degmooyinka sharci ahaan, si looga fogaado in ay khaldan yihiin hababkii horey loo soo abaabulay Cadastre. Dabcan, tani waxay ka dhigtay hababka dawladeed ee iyaga ka dhisan si ay u dhisto nidaamyadoodii cadastariga ah ee ilaa maanta ay adagtahay in la heshiiyo.
Dhibaatada aan ku jirin miisaaniyadda ayaa wali ku xanuunaysa dhinaca dhaqaalaha; mabda'a aasaasiga ah ee joogtaynta farsamada: Haddii aysan soo saarin lacag, way dhiman doontaa. Maanta oo loo wareejinayo Hawlaha, tirakoobka fudud ee wadatashiyada maalinlaha ah ayaa muujinaya in ay bilaabi karto lacag badan oo badan waqti ka hor, laakiin ugu yaraan waxay heshay isuduwidda baahida.
Isku-xidha Diiwaan-gelinta Guryaha ee Cadastre waa talaabada ugu fudud sii waaraya... dabcan, haddii ay fududahay. Laakiin way ka fiicantahay marka aad rabto inaad sii wadato wakhti dheer.
Cadadka 2014 wuxuu sii wadi doonaa inuu soo kabsado kharashka.
4. Diiwaangelinta isqorista - Qashinka Cadastral.
Mechanized nidaamyada sida aquilin, socodka diiwaanka wuxuu ahaa mid fudud:
Iskuduwidda, nadiifinta iyo muujinta xaddiga, iyada oo ujeedadu tahay in la helo badeecada buugga digital, oo leh muraayad aan toos ahayn ee maktabadda iyo sidaas darteed si looga fogaado in ay sii wadaan in ay abuuraan buugaag. Marka laga reebo Awoodaha / Xukunka iyo arrimaha kale ee sii waday inay ka shaqeeyaan Folio-ka Shakhsi ahaaneed.
Waxaa laga soo xigtey kuraasta firfircoon iyo taarikada liisanka. Tan, waxaa jiray nooc "folio dijital ah ama falcelin dhab ah oo la sameeyay", taasoo laf ahaantiisu ay tahay falcelin dhab ah (iyada oo la adeegsanayo farsamada lagu dabaqay), laakiin marka loo eego himilooyinka gaarka ah ee sharciga Honduran, iyo xoogsiga nidaamka, Real Folio waa inuu ku xirnaadaa Cadastre.
Cadastre by kacdoon ballaaran uu hogaaminayo ay u maps daabacay calaamadinta golaha photo-micneeyey ama saldhigga total files iyo kaararka beerta. Xafiiskana, juqraafiyadu waxaay ahaayeen kuwo digitalized, la xidhiidha oo la abuuray iyada oo la adeegsanayo qalab lagu dhexmuuqdo wakhtigaas oo leh VBA for Microstation Geographics. Waxay u muuqataa tallaabo ka dib in dhab ahaantii waxay ahayd oo keliya horumar ah ee technology sababtoo ah in 2003 kaydadka meel aan la fulin, laakiin khariidadaha la xidhxidhay ay centroid nidaamka arc-Guntin shaxda, si kastaba ha ahaatee habka hagaajinta dhan ahaa transactional . Kadibna, hijraaca waxaa loo sameeyey xogta xogta iyo maaraynta moobilka ee Bentley Map. Waqtigan xaadirka ah horumarinta qalab loogu talagalay Qgis.
Cadastre 2014: Kala soocida khariidadaha iyo diiwaanada ayaa la tirtiri doonaa.
Marka la galo BA_Unit (Diiwaangelinta Real Folio) iyo Spatial_Unit ayaa jira, geeddi-socodka kale ee macaamiishu wuxuu qabtay shaqada xiriirinta. Waxay dib uga noqdeen faylka cadawga, halkaasoo lagu soo gudbiyay fariinta Shakhsiyadeed ee Shakhsi ahaaneed, marka la barbardhigo qaybaha goobta, cinwaanada, aagga, sumeeyaha iyo geedo kale si loo abuuro isku xidhka.
Sawirka soo socda ayaa muujinaya xaqiiqda sharciga ah ee ku xiran xaqiiqada jireed. Inkasta oo ay tahay tusaale ka mid ah aagagga magaaleed, geeddi-socodku ma aha mid sahlan sababo kala duwan. Xaaladdii ugu fiicnayd waxaa suurtagal ahayd in la isku xiro 51% (Magaalooyinka iyo Degmooyinka Dhexe), xiriirka soo hadhay waxaa loo sameyn doonaa dalabka dalbashada iyo iyada oo loo marayo nidaamyada titrada ee yoolka dalkan uu yahay ... gaar ah.
Nidaamka Midaysan ee Diiwaangelinta, mar la abuuray iskuxirka wuxuu muujinayaa labada dhabta ah, oo leh digniino ku saabsan kala-sooc la'aan. Marka saxanka laysanka oo aan lahayn xiriiriyaha Cadastral wuxuu muujinayaa heeganka weyn ee «Lama guuro sida sharcigu dhigayo«. Sidoo kale saamaynta xakameynaya adeegsiga, domainka ama qabsashada dhulka, in kasta oo labadan arrimood ay yihiin mowduuc sugaya ... maqaal kale, sababta oo ah daciifnimada hay'addu waa mowduuc aysan aqoonyahannada tiknikolojiyadu had iyo jeer fahmin.
Nidaamka dhidibada waxaa lagama maarmaan ah -wax walbaba waan qirayaa- qeexaan habka digniinta iyo habka dayactirka, si aanay u faragelin waxyaabo aan caadi ahayn oo 18 ah, oo ay ka mid yihiin:
Xidhiidh aad u badan oo u dhaxeeya jajabyada iyo qorista,
Kala duwanaanta xuquuqda ay leedahay dokumantiyada gudbinta dheeraadka ah,
Kala duwanaanta goobaha ay soo duulaan muuqaalka guud ee dadweynaha,
Kala duwanaanshaha isbeddelka Diiwangalinta ama Cadastre ka dib markii la shubo cadawga,
Taariikhda aan soo saarin,
Kala duwanaanta magacyada milkiilayaasha ama dib-u-helidda milkiilayaasha,
iwm, iwm, iwm.
Tani, farsamada ayaa si weyn loo isticmaalay si loo sii wado tiknoolajiyada ayaa la isticmaalay: Ku dar midka ugu dhibta badan. Isticmaalida si aad u aragto digniin, waxay eegeysaa sida loo xalliyo; Wadarta, waa mid ka mid ah mabaadi'da Diiwaangelinta: xayeesiinta.
Wax waliba way fiicnayd, illaa iyo markii lala xiriiriyay Cadastre.
5. Xogta Cadastarada iyo Diiwaangelintu marnaba isku mid ma noqon doonto.
Tallaabada isku xirka in muddo ah "siyaasad ahaan loo adeegsan karo" waa la joojiyay ilaa maanta waa mid ka mid ah caqabadaha adag ee ku jira sharciga qasabka ah, in soo jeedin kasta waa inuu ubaahan yahay isku xirka Diiwaanka Cadastral. Qaybtani waa xoogaa adag, labadaba inaad noqoto mid iska dhiibitaan ah laakiin sidoo kale u baahnaashada sida Pope-ka. Halkan waxaa ku yaal hagitaanno, kuwaas oo badanaa socodsiiya howlaha caadiga ah.
Qeybta Cadawga iyo Diiwaangelintu marnaba isku mid ma noqon doonto. Tani waxaa loo isticmaalaa habdhaqan dulqaad leh, kaas oo tixgelinaya qaabka cabbiraadda, xaaladaha magaalooyinka / baadiyaha sida ay u kala weyn tahay, xaaladdan xaddiga ugu badan ee loo isticmaalay sahanno hore, sida ku cad muuqaalka soo socda. Sida dulqaadashada ugu sarreeya waxaanu tixgelinnay 6% iyo sida aad u arki karto, adigoo isticmaalaya habdhaqan sidan oo kale ah, degaanka wuxuu ka soo degaa 6% ilaa 1% sida xajmiga hantida sii koraya.
Foomka waxaa loo geliyay nidaam qarsoodi ah oo ku jira xogta macluumaadka, sidaas darteed waxaa si habsami leh loogu soo bandhigay nidaamka. Haddii meeshan dukumiinti aysan ku jirin gudahaas, markaa nidaamku wuxuu kor u qaadaa digniin ah farqiga degaanka.
Ma ahan mid la mid ah diiwaanka cadastaroolka marka loo eego rikoodhada dusha sare. Haddii hantida loo qiyaaso shan goor, iskudhafyadeeda ayaa ka soo bixi doona waqti kasta (inta lagu jiro dulqaadka dulqaadka). Maxaa loola jeedaa, in haddii iskudhafyadu ay ku jiraan marxaladan, muhiim ma aha in la baddalo hantida cadastoolka; waayo LADM waxay tixgelisaa diiwaanka qiyaasta, Survey_classes sida xiriirka ka dhexeeya Source_document iyo Spatial_unit.
Suurtogal maaha in la adkeeyo nidaamyada xiga waa inay u muuqdaan magacyada dadka; inkastoo mabda'du ay sheegeyso in ay tahay in si cad loo fahmo, waxaan fahamsanahay in ay tahay markaad u baahato inaad la tashato khariidad, laakiin haddii sawir-qaadaha uu si cad u caddeeyo inuusan laheyn khibrad, markaa xuddunku wuxuu noqon karaa furayaal cadcad. Waxay u muuqataa mid sahlan, hase yeeshee samaynta qareenadu waxay fahamsan yihiin waqti; taas oo aan rajeyneyno in lagu xalliyo qoraalka diiwaangelinta.
Suurtagal maaha in la bilaabo hanaanka, la'aantiis shahaadada xirfadleyda qiyaasta, hababka cabbiraadda, dulqaadka, qaababka bandhigga faylka iyo hababka isu-joogista u dhaxeysa xogta la soo saaray oo leh kala duwanaansho kala duwan. Haddii baahida loo qabo in remeasure meel oo dhan waa caddaynta ku jirta lagu qiyaaso hantida a, maxaa yeelay waxa ay si xun u la sara kiciyaa ama habka kala duwan yihiin si ay u LADM arko in ay Point_parcel, kaas oo looga fogaado kartaa xukunka Armageddoon -taas oo hadda taagan-.
Taariikhdeeda sharciga ah waa tixraac, ma aha wax laysku halleyn karo. Waxay ahayd lagama maarmaan in uu ka tago sharciga, sahanka cadastral ku salaysnaan doonaa xaaladda jirka, iyo haddii ay dhacdo in uu jiro farqi u dhexeeya deegaanka documentary iyo aagga cadastral, oo aan bedelay colindancias xaaladda, mana aha Miciisa sheegashada caddayn , mana adjoins goobaha dadweynaha, meesha cadastral adkaan. Sidee u fududahay codka, laakiin fulinta qoraallada jira waa in la beddelo, waa sheeko kale; tan iyo sharci ahaan waa in aan aqoonsado xaq u diiwaangashan oo anna ma aan sheegi karo waxa aan joogto ahayn aqbalay shuruudaha hore, oo kaliya sababtoo ah beegyada uu beddelay.
Waa lagama maarmaan in la qeexo hababka ka-hortagga macluumaadka taas oo fududeynaysa aasaasida macluumaadka joogtada ah. Haddii hay'ad sharci ah ay tahay Banco Davivienda, laakiin nidaamyada shatiyeysiga waxay u muuqdaan magacyo kala duwan oo laanta kasta ah, nidaam isku-dhafan ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale, haddii hantida lagu soo kordhiyay waddooyin kala duwan, laakiin waa isku mid, ma aha mid mashquul ku ah wadajirka dhulka laakiin isku dhafid. Laakiin labada dhinac waa inay ahaadaan sharci.
Caqabadaha ugu waaweyni waa had iyo jeer ilaha aadanaha, qaybtani waxay inta badan u adkaysaa in ay isbedesho oo la daba-galiyo waxyaabahaas waa in la sameeyo hal kaliya. Ma jiraan wax ka hadhay dib u soo celinta oo ka tago ilaalin. Ujeedada ujeeddooyinka siyaasadeed ayaa xitaa noqon karta mid wax tar leh, inkasta oo aynaan ognahay inay noqon doonto khatar ugu weyn. Ilaa xadkeed isticmaalka sharciga ah waxaa laga faa'iideysan karaa, dibad-bixinta waa dembi daad ah, iyada oo la bixinayo danaha gaarka ah ee gaarka loo leeyahay.
6. Ugu dambayntii:
Sida aan hore u sheegay, sheyga maqaalkani ma raadinayo inuu soo saaro raashin sixir ah. Gaar ahaan xaqiiqda dhabta ah ee hay'adaha dalka ka jira waa mid aad u adag, ma ahan sababo farsamo ama sharci ah, laakiin waxay u noqoneysaa awoodda iyo awood la'aanta hay'adaheeda. Si kastaba ha ahaatee, tusaaluhu wuxuu muujinayaa in ay suurtagal tahay in ay sameyso waxyaabo xiiso leh oo ku jira waddamada saddexaad ee adduunka, haddii ay ka faa'iidaystaan ​​daqiiqado sharaf leh si ay u xiraan dhinacyo aan dib loo noqon karin. Dalalka kale waxay ku sameeyeen nacas aan yareyn, kuwa kale xaalado fiican hay'ad ahaan waxay la dagaallamayaan iyadoo isdhexgalka dhabta ah.
Diiwaangelinta hantida waxay ku salaysan tahay dareenka guud. Macaamilada xuquuqda hantida ayaa jira tan iyo markii uu ka helay beeraha, wuxuuna xaqiiqsaday in uu abuuri karo degsiimooyinka aadanaha.
Shaxda muujinaysaa maris ah oo ka mid ah suugaanta diinta, taas oo marka la eego waxaa loo isticmaalaa in muuqan laga waydaarsiga in sharciga diiwaan-gelinta, kharajka safarka ku bixisay in la soo dhaafay, lacagta birta ah biraha qaali tirin in dheelitirka -maxay tahay fikrad aad u fiican qof kasta oo rasmi ah-. Qofna shaki galiyey xaqiiqada hantida ama qiimaha xuquuqda lagu qoray «Furan Furan«. Dabcan, haddii aan dooneynay inaan ku xirno cadastre iyo diiwaangelinta maalintaas, waxaan lahaan laheyn isku dhibaato, iyo isku tasho shaqo la mid ah kuwa sigaarka cabba sida aan nahay.
Waayo, hadda Honduras ee view of version cusub ee nidaamka, geedi socodka qaabeeyey yihiin ku dhowaad u muhim ah sida dhinacyada ka gaarin, maxaa yeelay, ganacsiga waa isku mid, deegaanka isbaddali doonaa in ugu yaraan, habka laftiisa beddeli doonaa. In dunida ka mid ah hal-abuurnimo farsamada aanu ku nool nahay, oo u dhexeeya markii aan bilaabay qoraal ah article iyo taariikhda by fursad waxaad ka akhrisan waxaa soo gaaray, technology a kaca cusub bixiya xaliyaan dhibaatada of diiwaan-cadastre, iyo saddex taliyayaal cusub bixiya ay adeegyada. Waa in aan xusuusanno in teknoolajiyadu ay tahay talada kaliya; isku dheelitirka ka dhexeeya cadaadiska u dhexeeya tiknoolijiyada iyo baahida loo qabo casriyeynta waa heerarka.
Isdhexgalka Diiwaangelinta iyo Cadastre waa cutub loo baahan yahay in la bilaabo. Haddii ay tahay mid la yiraahdo oo aan waligeed la dumin, waxay noqon doontaa sheeko saynis. Xaq ama sax, marka ay bilowdo, waxay qaadataa farshaxan ka badan sayniska si ay u keento xaqiiqda. Laakiin waa hab si nooc, taas oo si dhib leh ku qaadataa laba qof oo ah dadka qaba kaabiga ku cad, maxaa yeelay, xal u ah kiisaska oo dhan waa on khayraadka aadanaha ee hadda jira, kuwaas oo ku takhasusay maadooyinka iyaga u gaar ah: Diiwaangelinta, Cadastre, maamulka dalka, qalabaynta , nidaaminta iyo ... marijuana dhiirrigelin leh. 🙂
Waxaa jira caqabado cusub. Qeybta kale ee maqaalkeedu waa qiyaastii geeska.
Post Previous«Previous files SHP Open la Google Earth
Post Next size dhabta ah ee dalalkaNext »
2 Waxay ku jawaabeysaa "6 dhinacyada si ay u tixgeliyaan isdhexgalka diiwaangelinta - Cadastre"
Ma aqaan haddii aan si fiican u fahmay su'aasha, iyo haddii ay ka badan yihiin hal. Waan isku dayi doonaa
Maqaal ka mid ah sharciga Honduran wuxuu leeyahay haddii farqi u dhexeeya camalka iyo cadastre, iyo xudduuduhu isma beddelin, oo macluumaadka cadowgu waa kii ugu dambeeyay, macluumaadka kaararka dambiilayaasha ayaa badiyaa. Sidaa darteed adeegsadaha waa inuu beddelaa qoraalkiisa. Ficilku waa inuu u hoggaansamo sharraxaadda farsamo ee diiwaanka cadastral.
Xaaladda kormeerka, oo aan u baahnayn xeerka cadastral, sida kiisaska la xiriira dacwadda, looma baahna in la abuuro koodh cadastral ah. Si fudud u qor cabirka (ISO 19152 Survey Record).
Xudduudda waxaa lagu soo saaray nidaamka si otomaatig ah, iyadoo si isdaba joog ah loo falanqeynayo qorshooyinkii markii hore taabtay, ka dibna kuwa taabanaya wanaaga dadweynaha, waxay falanqeeyaan kuwa dhinaca kale ah. Macluumaadka loogu soo guuray nidaamka bedka, waxaa lagu sameeyaa xirmo gudaha BD ah, marka la eego macluumaadka aan loogu guurin Geographics, waxaa sameeya VBA lagu keydiyo serverka, duulista. Haddii aysan sahan jirin ama uusan laheyn qorshe la aqoonsan yahay, laakiin haddii aad leedahay xogta duurka ee kuugu dhow, waxaa loo rogi karaa dhibic dhibco ah, si aysan u lumin macluumaadka la soo uruuriyay, ama uu galo khilaaf maxaa yeelay malaha joomatari cabbir ah. Laakiin ha abuurin cadayn cadayn ah oo xog ah oo aan ku jirin nidaamka.
ruben tacuri isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jecelahay inaan ogaado sida ay uxirmayaan furayaasha cadastral-ka isla markaana haddii ay dhacdo in iibinta dhul ay leedahay been abuur fikradeed, taasi waa, waxay yiraahdaan dhinaca woqooyi waxay xuduudeysaa qof X halka dhanka barina ay xuduudo qof. Iyo sidoo kale X iyo Y midna lahayn guryo xuduudo ku leh dhulka oo keliya waxay leeyihiin laba xuduudo oo koonfurta ah oo leh jid dadweyne iyo dhinaca galbeed oo leh dariiq xaafadeed.